Man United Oo Xasuuqday Bournemouth, Mason Greenwood Oo Wacdaro Dhigay & Red Devils Oo Kaalinta 4-aad Gashay. – Kooxda.com
HomePremier LeagueMan United Oo Xasuuqday Bournemouth, Mason Greenwood Oo Wacdaro Dhigay & Red Devils Oo Kaalinta 4-aad Gashay.
Man United Oo Xasuuqday Bournemouth, Mason Greenwood Oo Wacdaro Dhigay & Red Devils Oo Kaalinta 4-aad Gashay.
July 4, 2020 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta 0
Kooxda Man United ayaa sii wada qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa iyo guulihii xidhiidhka ahae ee horaalka Premier League iyaga oo markan kabaha la dul maray kooxda dhibaatoonaysa ee Bournemouth kulan ka dhacay Old Trafford.
Kulanka ayaa ahaa mid ay Man United ku bilaabatay si dagan iyaga oo Bournemouth ku maamulayay dhanka kubad haysashada sidoo kale qaadayay weeraro halis ah oo ay goolal ku doonayeen.
Man United ayaa bilowgii ciyaartaba ku dhawaatay in ay gool dhaliso kadib markii xididga Bruno Fernandes kubad looga dul qaaday daafacyada Bournemouth Laakiin Kubadiisa ayaa kor martay Goolka kooxda Bournemouth.
Kooxda Bournemouth ayaa Man United gool kaga naxsatay daqiiqadii 16-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Junior Stanislas kaas oo kooxdiisa hogaanka u dhiibay kana dhigay ciyaarta.
Kooxda Man United ayaa bilowday in ay xoojiso dadaalka ay ku doonayso in ay Ku dhaliso goolka bar-baraha iyaga oo qaadayay weeraro aan kala joogsi lahayn.
Daqiiqadii 29-aad ayay Man United dhalisay goolka bar-baraha iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Mason Greenwood kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/1 ay Man United ciyaarta dib ugu soo laabatay.
Man United ayaa daqiiqadii 35-aad hogaanka ciyaarta u qabatay kadib markii rikoodhe loo dhigay iyada oo uu u istaagay xiddiga Marcus Rashford kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/1.
Ka hor dhamaadka qaybta hore ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 45-aad ayay United sii dheeraystay ciyaarta iyaga oo uu gool qurux badan u dhaliyay xiddiga Anthony Martial kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/1 ay Man United si deg-deg ah ugula wareegtay hogaanka ciyaarta.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Man United wax walba ka samaysatay kooxda dhibaataysan ee Bournemouth kulan dhinac kaliya ahaa oo ay United awoodeeda ku soo bandhigtay.
Kooxda Bournemouth ayay Rajo gashay bilowgii qaybtii hore ee ciyaarta iyada oo loo dhigay rikoodhe kadib markii uu xiddiga Eric Bailly gacanta ku taabtay kubada.
Daqiiqadii 50-aad ayay Bournemouth dhalisay goolka 2-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Joshua King kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/2 ay dib u heleen rajo.
Kooxda Man United ayaa sii waday dadaalka iyo waliba maamulista ciyaarta iyaga oo doonayay in ay hubiyaan in ay gaadhaan guul muhiim ah oo kor u qaada rajadooda u soo bixista champions League.
Daqiiqadii 54-aad ayay Man United dhalisay goolka 4-aad ee ciyaarta iyada oo uu si qurux badan ugu dhaliyay da’yarka laga yaaban yahay ee Mason Greenwood Kaas oo dhaliyay goolkiisii 2-aad ee shaqasiga ahaa ee kulanka iyo goolkii 4-aad ee kooxdiisa ee kulanka.
Xiddiga da’yarka ah ee Mason Greenwood ayaa sidaas ku noqday xiddiga ugu fiican ciyaarta kadib qaab ciyaareed heer sare ah oo uu soo bandhigay.
Man United ayaa daqiiqadii 59-aad dhalisay goolka 5-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga khadka dhexe ee Bruno Fernandes kaas oo laad xor ah ka dhaliyay kulanka kana dhigay ciyaarta 5/2.
Bruno Fernandes ayaan dhankiisa ka dhicin xiddiga ugu fiican garoonka marka loo eego in uu ku lug lahaa 3 gool oo ka mid ah goolashii laga dhaliyay kulanka isaga oo dhaliyay hal gool 2 kalena caawiye ka noqday.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Man United sidaas ku meel gaadh ugula wareegtay kaalinta 4-aad ee kala saraynta horyaalka Premier League.
Barcelona Oo Lagu Soo Waramayo In Ay Heshiis La Gaadhay Tababarihii Shaqada Ka Badali Lahaa Quique Setien